MACLUUMAADKA TARANKA NOOLAHA EE IRISH WOLFHOUND DOG IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Noolaha ee Irish Wolfhound Dog iyo Sawirro
Dadka waaweyn ee Irish Wolfhounds
Irish Wolfhound waa eey cabbirkiisu aad u weyn yahay, kana mid yahay kuwa ugu dhaadheer adduunka, oo gaara baaxadda faras yar. Madaxu wuu dheeryahay dhakaduna aad uma balaadho. Afku wuu dheer yahay oo xoogaa waa la tilmaamay. Dhagaha yaryar waxaa dib loogu celiyaa madaxa marka eeyga dabco oo qeyb baa la saaraa marka eeyga faraxsan yahay. Qoorta ayaa dheer, xoog leh oo si fiican u qalooca. Laabta way ballaadhan tahay oo qoto dheer tahay. Dabada dhaadheer ayaa soo laalaada oo xoogaa qalooca. Lugaha waa dhaadheer yihiin oo xoog badan yihiin. Cagaha waa wareegsan yihiin, oo leh suulasha si fiican u qalooca. Muraayad, jaakad jilicsan ayaa qallafsan taabashada madaxa, jidhka iyo lugaha oo ka dheer indhaha iyo daanka hoostiisa. Midabada Coat-ka waxaa ka mid ah cawl, brindle, casaan, madow, caddaan saafi ah ama fawn, iyadoo cawdu tahay tan ugu badan.
Irish Wolfhounds waa dad macaan, dulqaad badan, naxariis badan, feker badan oo caqli badan. Dabeecadooda wanaagsan waxaa lagu aamini karaa carruurta. Iyagoo doonaya oo doonaya inay ka farxiyaan, waxay si shuruud la’aan ah daacad ugu yihiin milkiilahooda iyo qoyskooda. Waxay u muuqdaan inay salaamaan qof walba saaxiibkood, markaa ha ku xisaabtamin inay yihiin waardiye, laakiin waxay noqon kartaa carqalad si fudud cabirkooda darteed. Noocan weyn wuxuu noqon karaa mid cakiran oo gaabis ah inuu ku bislaado jirka iyo maskaxda labadaba, isagoo qaadanaya qiyaastii laba sano ka hor intaysan si buuxda u koraan. Si kastaba ha noqotee, si dhakhso leh ayey u koraan oo cunno tayo sare leh ayaa lagama maarmaan ah. In kasta oo ay muhiim tahay in loo qaato cunug soo koraya socod maalinle ah caafimaadkooda maskaxeed, jimicsiga adag waa inaan lagu qasbin waxaana laga yaabaa inay canshuur badan ku noqoto jirka eeygan markii uu yaraa. Baro inaadan soo jiido xadhigiisa intaysan xoog yeelan. Irish Wolfhound waa sahlan tahay in la tababaro. Si wanaagsan ayuu ugu jawaabaa inuu adkeeyo, laakiin debecsan, iswaafaqsan, hoggaamineed . Habkani oo leh badan fahamka canine waddo dheer ayuu mari doonaa maxaa yeelay eeygan si dhakhso leh ayuu u qabsanayaa waxaad damacsanayd. Hubso in eeyga yar la siiyo isku kalsooni badan intii suurtagal ah oo aad marwalba la jaanqaadi karto, si ay ugu dhex noqoto eey loo siman yahay, kalsooni leh. Eygan deggan wuxuu si wanaagsan ula dhaqmaa eeyaha kale. Tani sidoo kale waa run oo leh xoolaha kale .
Dhererka: 28 - 35 inji (71 - 90 cm)
Miisaanka: 90 - 150 rodol (40 - 69 kg)
muqisho feeryahanka at 8 isbuuc
Irish Wolfhound wuxuu gaari karaa ilaa 7 fuudh oo dherer ah marka uu ku istaago lugaha dambe.
U nugul wadnaha, lafaha kansarka , buunbuunin , PRA, Von Willebrands, iyo sinta dysplasia.
Irish Wolfhound laguma talinayo nolosha guriga. Guriga dhexdiisa wax hawl ah kama ahan oo sida ugu fiican ayey ku shaqeyn doontaa ugu yaraan daarad weyn. Tani waa nooc weyn oo u baahan meel yar. Waxaa laga yaabaa inuusan si fiican ugu habboonayn gaari yar ama mid yar.
Waxay ubaahantahay inay kamid ahaato qoyska waxayna noqon doontaa mid aan ku faraxsanayn qolka jiifka. Ahaanshaha indho indheyn, way ceyrsan doontaa oo sidaas darteed waxay u baahan tahay aag aamin ah, oo ood leh oo jimicsi lagu sameeyo.
Eeyahaani waaweyni waxay u baahan yihiin boosas badan oo ay ku ordaan, laakiin uma baahna jimicsi ka badan kuwa yaryar. Waxay u baahan yihiin maalinle socod halka eyga looga sameeyo ciribta dhinaceeda ama gadaashiisa qofka haysta hogaanka. Marna hore. Sida noocyo kale oo waaweyn waxaa muhiim ah in la xasuusto in xoog badan oo jimicsi ah, jimicsi xoog leh uusan u fiicnayn koritaanka iyo eeyga eyga yar, sidaa darteed u fiirso eeyahaaga wixii calaamado ah, laakiin wali waxay si dabiici ah ugu baahan yihiin socod maalinle ah.
Qiyaastii 6-8 sano
Aad buu u kala duwan yahay qiyaastii 2 ilaa 12 eey
baget basset hound sawiro isku dhafan
Jaakad qallafsan, dherer dherer dhexdhexaad ah waxay u baahan tahay qurxin joogto ah oo dhammaystiran burush iyo shanlo. Tan ku sii hay jaakada xaalad wanaagsan. Qiyaastii hal ama laba jeer sanadkiiba jaro jaakadda si aad uga saarto timo badan oo dhintay. Noocani waa celcelis daadiya.
Magaca Irish Wolfhound wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa waxaa loo adeegsadaa ugaarsade yeey, mana ahan muuqaalkiisa. Tani waa nooc aad u duug ah oo leh diiwaanno Roomaan ah oo ku saabsan taariikhda illaa 391 AD. Waxaa loo adeegsaday dagaalladii, iyo ilaalinta lo'da iyo hantida iyo ugaarsiga cirifka Irish, deerada, ugaadha iyo yeyda. Waxaa loo hayey ixtiraam aad u sarreeya oo dagaallo lagu dagaallamo. Irish Wolfhounds waxaa badanaa lasiin jiray hadiyado boqortooyo. Doofaar iyo yeey noqdeen bakhtiyey gudaha Ireland sidaas darteedna Irish Wolfhound ayaa hoos u dhacday tirada dadka. Sarkaal ciidan oo Ingiriis ah oo lagu magacaabo Captain George Graham ayaa ku abtirsaday iyaga qeybtii labaad ee qarnigii 19-aad. Noocii ayaa dib loogu soo celiyay hordhaca ah Daanyeer Weyn iyo Deerhound dhiig. Naadiga loo yaqaan 'Wolfhound Club' waxaa la aasaasay sanadkii 1885 waxaana aqoonsaday xisbiga AKC sanadkii 1897. Sannadkii 1902dii ayaa markii ugu horraysay loo soo bandhigay ilaalada Irishka inuu yahay mascot. Waxaa u aqoonsaday Naadiga Kennel inuu yahay isboorti isboorti 1925. Ururka Irish Wolfhound waxaa la aasaasay 1981.
IWCA = Naadiga Irish Wolfhound ee Mareykanka
Qof weyn oo Irish ah Wolfhound — Sawir waxaa iska leh David Hancock
Ivan Irish Wolfhound oo 3 jir ah— 'Ivan wuxuu kudhowaad yahay 200 rodol. iyo 37 inji dhererka garabka. Waa wiil sidan u jilicsan waxaanan dareemeynaa in lagu barakeeyay in gurigeena lagu soo qaato. '
chihuahua / jack russell terrier iskudhaf
Ivan Irish Wolfhound oo 3 jir ah
Lahaanshaha sawirka Tenderland Farms Texas
Brendan Irish Wolfhound wuxuu la socdaa milkiilihiisa / breeder, Frank Winters, oo ah 6 '1' BTW !! Xaqiiqdii waxay u dhigeysaa cabirka taranka aragti! Brendan waa qiyaastii 180 rodol (82 kg).
Kani waa Grainne leh milkiilaha / abuurka Frank Winters. Grainne waa Brendan walaashiis / qashin yar.
Siela the Irish Wolfhound, sawir waxaa iska leh Genevieve Simmons
Eeg tusaalooyin badan oo Irish Wolfhound ah
Irish Wolfhound Sawirada 1
biraha dahabka newfoundland mix puppy
eey buurta bernese iyo isku dhafka sarkaal oo dahab ah
shukulaatada Jarmalka eeyaha yar yar ee tilmaamaha
Mareykanka iyo Faransiiska oo isku jira bulldog